समझ गुणन तालिका गणित थप अध्ययनको लागि जग कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। यस्तो ज्ञान बिना प्रशिक्षण समस्याग्रस्त हुनेछ। त्यसैले, पनि प्राथमिक विद्यालयमा गुणन तालिका सिक्न आवश्यक छ।
जो गुणन तालिकाको आए?
गुणन तालिकाको सामान्य रूप मा पहिलो पटक पुस्तक Nikomaha Gerazskogo (म-द्वितीय शताब्दीयौंदेखि ई.पू. ...) मा देखा - "गणित परिचय।"
त्यसैले जो गुणन तालिकाको आए? पाइथागोरस छ, हुनत प्रत्यक्ष प्रमाण र यो कुनै प्रमाण - यो खोल्ने पहिलो कि विश्वास छ। त्यहाँ मात्र चौडी प्रमाण हुन्। जस्तै Nicomachus Gerazsky, पाइथागोरस बुझाउँछ आफ्नो काम मा।
यस मामला मा, त्यहाँ माटो ट्याब्लेटमा सबैभन्दा पुरानो गुणन तालिका जसको उमेर बारेमा 4-5 हजार वर्ष छ, एक छ, र यो पुरातन बेबिलोनको फेला गरिएको छ। यो हृदय मा गणना को सेक्साजेसिमल सिस्टम राख्नु। गणना को एक दशमलव सिस्टम रूपमा तालिका 305 ई.पू. मा चीन मा फेला परेन। तसर्थ, स्पष्ट "गुणन तालिका आविष्कार कसले" प्रश्न जवाफ - काम गर्ने छैन।
मिति, गुणन तालिका एक "पाइथागोरस तालिका" भनिन्छ र एक वर्ग जसको पक्ष संकेत कारक र कक्षहरू आफ्नो काम को लागत हो देखिन्छ छ।
हामी प्रशिक्षण सुरु
जसको छोराछोरी स्कूल गए, ढिलो होस् वा पछि छ आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको सिक्न र गुणन तालिका बुझ्न मदत गर्न। यसको अध्ययन रही, बच्चा पहिले नै थप र घटाउनुहोस् कसरी, थाह गणितीय सञ्चालनका एक विचार छ।
छोराछोरीलाई लागि गुणन तालिका प्रेरणा आधारित हुनुपर्छ, व्याख्या किन यो आवश्यक छ। तपाईं हामी केही कार्यहरू को कार्यान्वयन सुविधा गर्न सक्ने तालिकाको ज्ञान तथ्यलाई गर्न बच्चा ल्याउन एक उदाहरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, यदि पसलमा6चकलेट लागि प्रत्येक प्याकेजमा क्यान्डी तीन प्याकेजहरू, त्यसपछि चाँडै, यो एक द्वारा तिनीहरूलाई गणना गर्न आवश्यक छ धेरै चकलेट कसरी सिक्न र छ गर्न गुणा तीन, र तुरुन्तै परिणाम हेर्न छ।
तालिका सिक्ने सुरु गर्न, बच्चा गुणन कदम को सार बुझ्न पर्छ। यो पहिलो गणना सिद्धान्त व्याख्या गर्न आवश्यक छ। कि, उदाहरणका लागि, तपाईं38 * आवश्यक छ भने, यो 8 + 8 + 8 जस्तै बराबर हुनेछ छ। राम्रो बच्चा यस्तो उदाहरण सिक्न र गुणन सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ आधारमा।
आधार dismantled, र बच्चा प्रक्रियाहरु सिकेका छ, यो vyuchivaniyu गुणन टेबल सुरु गर्न आवश्यक छ
सिक्न सरल र सजिलो
तालिका सम्झिन - हार्ड। बच्चा, त्यसपछि सिक्ने प्रक्रिया सजिलो हुनेछ इच्छुक हुनुपर्छ। त्यसैले, हामी चासो र आनन्द संग गुणन तालिका सिक्न। त्यहाँ अध्ययन तालिका सम्बन्धित खेल धेरै प्रकारका छन्। बच्चा को च्यानल धारणा मदत राम्रो र छिटो जानकारी सिक्छन् संग, अध्ययन ठाँउ लिन्छ कि, आधारमा। खेल को रूप मा गुणन तालिका रोचक र बुझ्न सजिलो हुनेछ।
त्यहाँ धारणा तीन च्यानलहरू हो:
बच्चा च्यानल बढी विकसित दृश्य धारणा छ भने, यो उनको अध्ययन संग तालिका हेर्न आवश्यक छ। तपाईं कोठा मा एक makeshift तालिका रचनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। दृश्य धारणा अप प्रक्रिया गति र सजिलो पारित उहाँ सम्झनुहुन्छ।
श्रवण नहर - झन् श्रवण धारणा जानकारी छ। मिति, धेरै गीतहरू र कविता अध्ययन उद्देश्य हो। तसर्थ, बच्चा यसलाई आफ्नो श्रवण धारणा मा उपस्थित हो भने, तालिका सिक्न सजिलो हुनेछ।
आवश्यकता को kinesthetic धारणा सबै स्पर्श गर्दा, आफ्नो हात मा महसुस गर्न। यो तालिका छ त, यो अध्ययन दृष्टिगत गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। उदाहरणका लागि, प्लेट, घन वा अन्य कुनै पनि आइटम मा व्यवस्था र गुणन सिद्धान्त व्याख्या गर्न।
गुणन टेबल को रहस्य
एक खेल को रूप मा गुणन तालिका - प्राथमिक विद्यालय बच्चाहरु को लागि ठूलो। तपाईं खेल को तत्व को अध्ययन थप्न यदि यो सजिलो पारित उहाँ सम्झनुहुन्छ। memorizing गर्दा अब तालिका यांत्रिक स्मृति संलग्न। तर, सजिलो कण्ठ लागि associative विधि को राम्रो प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले प्रयोग अध्ययन गुणन टेबल सजिलो हुनेछ:
अडियो र भिडियो;
त्यहाँ पनि उदाहरणका लागि, भनेर थाह पाउँदा संख्या 9, हामी तालिका छिटो जाँच्न सक्नुहुन्छ, गुणन मा रहस्य हो।
बच्चाहरु, ब्याज संग सिक्न हुनेछ बच्चाको चासो यदि लागि गुणन तालिका। त्यहाँ गुणन तालिका कण्ठ vyuchivanii जो संग धेरै कविता र गीतहरू, छन्। यस्तो राइम पदहरूमा हामी दुई नम्बर र आफ्नो परिणाम को गुणन बारेमा भनिएको छ। पछि पद यो परिणाम थाहा गर्न सम्भव हुनेछ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ सहमतिलाई सेवा गर्नेछन्।
यस कविता र गीतहरू Memorizing, गुणन तालिका सजिलो र छिटो हुन सिक्न सक्नुहुन्छ।
तालिका पहिले नै सिक्न र automatism यो ज्ञान ल्याउन आवश्यक छ जब प्रभावकारिता मा कार्डहरू प्ले।
खेल: अनुत्तरित उदाहरण संग व्यापार कार्ड। माथि खाली पक्ष माथि गर्नुहोस्, मिश्रण र छोराछोरीलाई एक द्वारा एक कोरिएका हुन्छन्। कार्ड निकाल्दै, बच्चा प्रतिक्रिया - उदाहरण समाधान गर्न। उत्तर गलत वा दिइएको छ भने जवाफ सही हो भने, कार्ड छ, हटाइयो, त्यसपछि कार्ड खेल फर्के छ। फलस्वरूप, उदाहरण त फेरि, हल छोराछोरी तिनीहरूलाई लागि सामाग्री गाह्रो दोहोरिन र अझ, जवाफ कठिनाई कारण जो खेल, को अन्त मा छन्।
यो खेल को सुविधा दुवै सम्पूर्ण गुणन तालिकाबाट कार्ड लिन सक्छन्, वा विशेष नम्बर को लागि एउटा मात्र चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि थप थप्न छ।
यसरी प्ले, छोराछोरीलाई आफ्नो कौशल र automatism तिनीहरूलाई ल्याउन।
9 को गुणन तालिका को गोप्य
1 देखि 109सक्छन् औंलाहरु कुनै पनि नम्बर गुणन। यो उद्देश्य लागि यो संग सीधा औंलाहरु र औंलाहरूको मानसिक सफलता 1 देखि 10 अबको संख्यात्मक दुवै हात नजिकै राख्न गुणन गर्न, उदाहरणको लागि,69 मा आवश्यक छ, यसलाई उचाल्न (वा मोड्नु) छैटौं औंला आवश्यक छ। हामी छैटौं गर्न खडा औंलाहरु को संख्या गणना - तिनीहरूले5हुनेछ, र पछि - 4, सँगै संख्या नै यसरी 54 राख्नु र प्राप्त र परिणाम संख्या9दस पटक को दायरामा कुनै पनि अन्य नम्बर लागि गणना गर्न सकिन्छ।
परिसर गर्न सरल बाट अध्ययन
गुणन तालिका सरल संख्या, एकाइ संग IE बाट सुरु गर्न राम्रो छ सिक्न। उहाँले तालिका हल्का संख्या मा सिकाउन, बच्चा सिक्ने चासो गुमाउन छैन थाले। र यदि तपाईं संख्या 10,9सुरु, त्यसको विपरीत, तपाईं विश्वास आफूलाई मा गुमाउन सक्छ र थप प्रशिक्षण काम गर्न जाने।
संख्या 1, 2,3द्वारा गुणन को अध्ययन मा, बच्चा लगभग समस्याग्रस्त हुन हुनेछ विशुद्धता प्रमाणित हुन्छ, निर्णय को विशुद्धता प्रमाणित गर्न, र संख्या9सिक्न व्यवहार मा सक्षम छ।
को प्रयोग पाइथागोरस को वर्ग, र एक कारक 6, स्पष्टता लागि आवश्यकता तालिका सिक्न, रंग हरियो पहिले नै उदाहरण सिकें र धेरै छैन बाँकी के हेर्नुहोस्। यस अघि ध्यान बच्चा गर्न तपाईं कारक परिवर्तन गर्दा परिणाम नै, अर्थात् हुनेछ स्थानहरूलाई कि,2*9= 18, त्यसपछि9*2= 18 यदि तिर्नुपर्छ।
अनिवार्य प्रशंसा अध्ययन र प्रोत्साहन गर्दा। गाली गर्छन् वा दण्ड - यो केवल बच्चा तालिका को शिक्षा त्यागेर छ, र त्यसपछि यो ठूलो कठिनाई उहाँलाई दिइनेछ।
असामान्य र रोचक
को Pythagorean तालिका अध्ययन गरेर, तपाईं अझै पनि फिर्ता उच्च विद्यालय जाने र त्यहाँ एक गुणन तालिका छ रहस्य के हो बाहिर पाउन सक्नुहुन्छ।
20 औं शताब्दीमा विद्वान को 90 को दशक को अन्त मा ए ए Matveevym ग्राफिक छविमा संख्या स्थानान्तरणका बाटो द्वारा आविष्कार भएको थियो। "केट" आफ्नो शिक्षा आधारित गुणन तालिका को ग्राफिक छवि द्वारा सिर्जना गरिएको थियो।
विधि: संख्या (स्तम्भ गुणन परिणाम) तेर्सो प्रतिबिम्बित (उल्टो क्रममा), र प्रत्येक अन्य थप वा कम, क्रमशः सङ्केतन छन् गर्न संख्या तुलना गरेर, प्लस साइन इन गर्नुहोस् वा माइनस साइन छन्।
यो विधि प्रयोग गरेर हामी गुणन तालिकामा देख्न सक्नुहुन्छ ध्रुवीय सिस्टम मा एक तार्किक निर्माण संख्या छ जसमा फाइदा र विभिन्न ध्रुवीयता दुई ellipses गठन को बुरा। यो गुणन तालिका यसको ग्राफिक्स र ध्रुवीयता एक समग्र रुप हो भनेर बाहिर जान्छ।
एक अनिवार्य र पाठ्यक्रम को खण्ड मा एक प्रमुख चरण - सिक्ने र गुणन टेबल memorizing। यो ज्ञान स्कूल भर र भविष्यमा आवश्यक हुनेछ यो जीवन केही क्षणमा सजिलो बनाउनेछ। त्यसैले जो तालिकाको आए? गुणन र भाग तालिका, धेरै विश्वास रूपमा, पाइथागोरस द्वारा स्थापित। तर, वैज्ञानिक प्रश्नहरूको दस्तावेज काम कमी विशेषता सही छ। यस मामला मा, जो गुणन तालिकाको आए पक्कै, प्रयोग हस्तक्षेप र उनको अध्ययन मा लागू छैन।
आदेश Rosaceae फूल सूत्र
हर्कुलेसक्लस्टर र आफ्नो शोषण बारेमा निबंध
नदी कूदनेवाला - प्रकृति रूस एक खजाना trove
कालानुक्रमिक तालिका feta। Afanasiya Afanasevicha feta जीवन र काम बारे छोटकरीमा
खुट्टा गर्न radiating दुखाइ
विवरण: उदाहरण। प्रकृति को कलात्मक चित्रण
Yew बेरी - एक endangered बाचेको व्यक्ति
सुलेमानको बुद्धिमानी न्याय